musha nyika dzakabatana Singers Doja Cat Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Doja Cat Biography inokuudza chokwadi nezve yake Yehudiki nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Dumisani Dlamini naDeborah Elizabeth Sawyer), Mhuri, Rudo hupenyu.
Moreso, vanun'una vaDoja Cat (Ramlala naLucki), Muhoro, mambure akakosha, Hupenyu hweMunhu uye Mararamiro.
Kuita kuti nyaya ipfupike, tinokupa iwe mufananidzo wakazara weiyo Hupenyu nhoroondo yemuAmerican rapper, muimbi uye munyori wenziyo. Yedu Biography inotanga kubva pahudiki hwake nguva kusvika ave nemukurumbira.
Kurodza chimiro chako chememoir yedu, tinopa nzira yegalari yezviitiko zvakatenderedza hupenyu hwaDoja Cat. Kunze kwemumvuri wekusahadzika, mifananidzo yaunoona pazasi inopfupisa nhoroondo yehupenyu hwake.
Doja Cat Childhood Nyaya - Iyo Untold Biography Chokwadi.
Ehe, tinomuzivisa semukurumbira mukuru nenziyo dzake dzeR&B-flecked pop. Zvisinei nerumbidzo yake, isu tinoziva kuti vateveri vashoma chete ndivo vakaverenga chidimbu cheDoja Cat's Biography.
Naizvozvo, isu takaona zvakakodzera kuti tikushandirei inonakidza nyaya yaDoja Cat uye nekuputsika kwenyaya yehupenyu hwake muindasitiri yevaraidzo. Nediki ado, ngatitorei bhora kutenderera.
Doja Cat Yevacheche Nyaya:
Kutanga, Amala Ratna Zandile Dlamini akaberekwa musi we 21st waOctober 1995. Akaberekwa naamai vake, Deborah Elizabeth Sawyer, uye baba vake, Dumisani Dlamini.
Amala Ratna Zandile Dlamini, anozivikanwa saDoja Cat's kuzvarwa, zvakaitika munharaunda ine ruzha yeTarzana, muLos Angeles, CA, US. Pazasi pane collage yevabereki vake (Dumisani Dlamini naDeborah Elizabeth Sawyer).
Mufananidzo waamai vaDoja Cat, Deborah Elizabeth Sawyer nababa, Dumisani Dlamini
Nguva pfupi mushure mekuzvarwa kwaDoja Cat, vabereki vake vakapatsanuka. Saka, amai vakatamira kuNew York City, kwavakagara kwemakore mashanu. Zvisinei, mhuri yake yakazodzokera kuCalifornia mu Oak Park. Amai vaDoja Cat vakaita kuti anyorese mu ballet. Zvakare, tapira uye jazi zvidzidzo kubva pamakore mashanu.
Mukuwedzera, akadzidza Piano. Tete vechiduku vaDoja, muimbi, vakamudzidzisa zvidzidzo zvokumubatsira kupinda chikoro chokudzidzira unyanzvi.
Asi ipapo mhuri yake yakabva yatamira pedyo neSherman Oaks nharaunda yeLos Angeles. Doja Cat aive nemakore gumi nerimwe pavakatama.
Mufananidzo wehudiki waDoja Cat nemukoma wake mukumbundira amai vake.
Mhuri ikozvino yaigara muashram mumakomo eAgoura Hills. Vakaita chiHindu kwemakore mana. Tichiri ku ashram, Doja Cat anga achitamba manyorerwo eIndia emutambo wekare unonzi Bharatanatyam.
Paakakwegura uye achienda kure ne ashram, Doja Cat akaenderera mberi kuenda kumakirasi ekutamba. Akabatana nehunyanzvi pop-yekukiya troupe. Uyezve, akakwikwidza muhondo dzekutamba muLos Angeles yose.
Munguva iyi yehupenyu hwake, Doja Cat aipfeka machira anovhara musoro uye achiimba bhajans patemberi yechiHindu.
Zvichakadaro, nyanzvi yejazz yekuAmerica Alice Coltrane (pasi pezita rechiSanskrit rokuti Turiyasangitananda) ndiye aive shamhu. Zita rechiHindu.
Anodakadza Doja Cat semwana mudiki.
Doja Cat Mhuri Yemhuri:
Doja Cat ndeyemhuri ine hunyanzvi. Amai vake, Deborah Elizabeth Sawyer, mupendi. Zvakare, baba vake, Dumisani Dlamini, mutambi, munyori, uye mugadziri wefirimu.
Kunyangwe kuparara kwehukama hwemubereki wake, aive nekwaniso izere kune zvinodikanwa zvehupenyu. Pokugara, mbatya, nedzimba zvaisava nyaya. Vakanga vaine zvakakwana zvekuchengeta nhengo yega yega yemusha.
Doja Cat Mhuri Yemavambo:
Ndichitarisa madzitateguru ake anoshamisa. Amai vaDoja Cat, Deborah Elizabeth Sawyer, muJudha-muAmerica. Zvichakadaro, baba vake, Dumisani Dlamini, muSouth Africa.
Baba vake ndeverudzi rwechiZulu. Isu tinomubatanidza zvakanyanya nekuridza firimu rekwaya rekuSouth Africa ra1992 Sarafina!
Naizvozvo, Doja Cat ndeye dzinza rakasanganiswa. Iye muSouth Africa uye chizvarwa chechiJudha-America. Nekudaro, Doja Cat, mushure mekutama kwababa vake, akaberekerwa muguta rakabatikana reLA, California, muUnited States.
Saka nekureva, tinogona kufunga kuti Doja Cat ndeyeAfro-American. Asi, anobva kunharaunda yepasi peguta muSan Fernando Valley mudunhu reLA, California. Pazasi pane mufananidzo unoratidzwa wekwakabva mhuri yeDoja Cat.
Pikicha yekutarisa yemhuri yaDoja Cat.
Doja Cat Yekutanga Basa:
Amala Ratna Zandile Dlamini akange aine gore rinotambudza rekuzviwana. Kutumira nzira dzake pa SoundCloud kwaive kwakaoma. Basa rake rakatanga kuumbwa mu2012. "Saka Yakakwirira" ndiko kwekutanga kurodha zvachose pane yake SoundCloud account.
Munguva pfupi yakwana, akabata pfungwa dzaDr Luke. Akazomusainira Kemosabe Records. Kunze kweRCA Rekodhi, uye kutsikisa kambani Prescription Nziyo pamakore 17. Ichi chibvumirano chakauya nekubatana kwechinguva neRoc Nation.
NaAugust 2014, Doja Cat yakaburitsa yake yekutanga EP, Purrr!. "So High" akawana remix ndokuzoburitswa futi se solo solo single. Kunyanya zvakadaro, ruzha rwakaratidzwa paFox series Empire.
Album chinyorwa chifukidziro cheDoja Cat yekutanga EP, Purrr!
Kutevera munguva pfupi, Doja Cat yakasaina kuOG Maco's label, OGG. Mushure mekusaina mukupera kwa2016, Maco naDoja Cat vakabatana pa "Monster." Iyo track inobva kuna Maco's Vana veiyo Rage muna 2017.
Nekudaro, hazvina kusvika muna 2018 paakava hutachiona painternet. Mumhanzi wake "Mooo!" yaive nyaya yake yekubatana. Doja Cat yakave yakakurumbira pamapuratifomu seTikTok. Nekuda kweizvozvo, akawanda enziyo dzake akajaira kugadzira mavhidhiyo.
Doja's debut studio album, inonzi "Amala", yakatanga muna 2018. Iye akaiburitsa zvakare gore rinotevera senge Deluxe vhezheni. Tsika dzake manakiro anotora kubva kumashure kwake kwezviitiko zvepamhepo kunge wechidiki wemuguta. Anoshandisa yakawanda yezororo rake pakombuta.
Makore ake ekutanga aisanganisira ipfupi stint kurodha makehift tutorials paYouTube. Iye muvaraidzi anopinda mumashure-tsika. Iye anoshambidza mambure pamusoro penyaya dzakasiyana.
Iyo Pix yeAlbum kavha yeiyo deluxe vhezheni ye "Amala."
Doja Cat Dzidzo:
Kuda kwechikamu chechidiki cheRuzha kwaive kukakavara kuzvidzidzo zvake. Doja Cat yaigara ichisvetuka chikoro kuti itore chikamu mu online chatrooms. Akaenda kuJunior High Chikoro, Los Angeles, California, United States.
Zvisinei, akazopedzisira asiya chikoro chesekondari. Akaita saizvozvo pazera regumi nematanhatu kuteedzera mimhanzi yake zviroto. Zvakangodaro, Doja Cat akatsanangura hupenyu mushure mekusiya chikoro se "chakaipa".
Aifanira kurara pasi, achipedza "husiku hwese nemasikati" achitsvaga internet. Doja aigara achitsvaga kurohwa uye zviridzwa kubva kuYouTube. Zvidimbu zvinowanzo dhawunirodwa uye zvinoshandiswa kugadzira iye Melody.
Muzvose izvo, aizozvidzidzisa kutamba chibharo nekuimba. Iko kuzvisimudzira kwaive panguva isina basa. Mushure meizvozvo akagadzira mimhanzi uye akaiisa ku SoundCloud.
Doja Cat Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Ari munzira yake kune mukurumbira, akaburitsa yake yechipiri studio album "Hot Pink". Yakava kubudirira kukuru. Iyo track yakazviita kune yepamusoro gumi yeBillboard 10 chati. Doja zvakare aive ne remix yemumwe wake "Say So" naNicki Minaj. Yakakwira Billboard Hot 200 muna 100.
MunaMay 2020, akataura pa Vhiki “Mumaziso Ako.” Uye zvakare, akaonesa pane imwechete "Shimmy." Iyo chidimbu chakauya kubva kuiyo Deluxe vhezheni yaLil Wayne's 2020 album yakanzi Funeral.
Zvishoma nezvishoma, muna Chikumi, akave akaonekwa pa "Pussy Kutaura" neCity Girls. Iye, mukuwedzera, akaburitsa vhidhiyo ye "Saizvozvo". Doja akasarudzwa kuve Best Female Hip Hop Performer. Zvakare, Vhidhiyo yegore pane ye20 BET Mipiro.
Panguva ye20 BET Awards - Doja Cat nekukudza kwake.
Doja Cat Biography - Kumuka kune Mukurumbira:
Zvakakosha, muna Ndira 2021, Doja Katsi yakaratidzwa mu "Best Friend" narapper Saweetie. Vhiki rakatevera racho, akaonekawo Megan Tea Stallion. Vaviri ava vakaita remix yekuti “34+35” yakaimbwa na Ariana Grande.
Mushure mekuburitswa, iyo remix yakaita nhamba 2 paBillboard Hot 100. Pakutanga mu2021, TikTok yakaunza dambudziko rehutachiona. Yakashandisa mashup e "Migwagwa" uye "Isa Musoro Wako Pfudzi Rangu" naPaul Anka.
Nekuda kweizvozvo, zvakakonzera iyo track kuti iite Billboard Hot 100, panhamba 16. Mushure meizvozvo, Doja Cat akagamuchira mazita matatu.
Panguva ye63 Grammys yeGore, iye akagamuchira Akanakisa Nyowani Artist. Chigadzirwa chake chehunyanzvi "Say So" chakagamuchira mazita eRecord yeGore. Ipapo, iyo Yakanakisa Pop Solo Performance.
Chizvarwa chekuCalifornia pa63 Grammys yegore vachiita "taura kudaro."
Muna 2021, vakamuisa pane iyo "Nguva 100 Inotevera" rondedzero. Inoburitsa huwandu hunobuda zana, aine kunyora kwake naLil Nas X. MunaJune, gore rimwe chete, chidimbu "Vanoda Kuziva" chakaburitswa.
Iyo albham yakava yekutanga svondo svondo nemukadzi wechikadzi munhoroondo yaSpotify. Mushure meizvozvo, akaridza muenzi mumitambo yeTV Dave, munaJune 2021.
Mushure mekugamuchira mazita e Best Best Artist, Rekodhi regore uye Best Pop Solo Performance.
PaVashandi Zuva rekupera kwevhiki, iye anonakidza anovaraidza anoita kuJay-Z's Made In America Festival. Moreso, padivi peDoja Cat inobata iyo 2021 MTV Vhidhiyo Music Awards. MunaNovember 2021, Doja Cat inovaraidzawo paZuva N Vegas mutambo muLas Vegas, Nevada.
Ndiani Doja Cat Kufambidzana?:
Nekuda kweDoja Cat inonakidza hunhu, inopenya kuburikidza mumitambo yayo. Hupenyu hwake hwerudo chidzidzo chehurukuro. Zvakare, iyo nyeredzi yakasimbisa kuti haisi kupokana nekufambidzana nevarume nevakadzi zvakafanana.
Doja Cat aimbova nemukomana. Akanga ari mutambi pamwe chete. Anonzi Johnny Utah. MunaAugust 2019, akatanga kufambidzana neiyo indie rock nyeredzi. Nehurombo, hukama hwakatsemurwa muna Kukadzi 2020.
Doja Cat, pamwe naye Ex-Mukomana, Johnny Utah.
Kurambana kwaive nerunyararo. Havana kupatsanuka nemazita akashata. Sekureva kwaDoja Cat, pakange pasina mutambo pakati pavo. Hukama hwavo hahuna kuzoshanda sezvaitarisirwa.
Zororo, muna Chikunguru 2021, Doja Cat yakaenda kune mumwe musi muLos Angeles. Zuva rake raive rapper weBritish Bree Runway. Akatumira tweet, "Ndine musikana, uye ndiri kuenda kuruzhinji." Kunyange zvakadaro, hatina kusimbisa zvizere kana chirevo ichi chakaitwa mukuseka.
Anofara Doja Cat nemusikana waanofungidzirwa kuti musikana, Bree Runway.
Doja Cat haisati yabuda pachena nezve maitiro ake.
Doja Katsi Hupenyu Hwemhuri:
Doja Cat yakanakidzwa nerutsigiro ruzere kubva kumhuri yake. Zvisinei nekurerwa nemubereki mumwe.
Angadai asina kusvika kure kana kusiri kuzvipira uye kutarisira. Ngatitorei chinguva kuziva zvakawanda nezvenhengo dzeimba yake.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Doja Katsi Baba - Dumisani Dlamini:
Zvichakufadza iwe kuti baba vaDoja Cat, Dumisani Dlamini, akatamba mumimhanzi yeBroadway yeLion King. Isu tinobvumawo Dumisani Dlamini saYizo Yizo. Iye anowedzera mukurumbira mukuridza mu 1992 Zulu choral film Sarafina! Ona mufananidzo pazasi.
Dumisani Dlamini airidza mumutambo we1992 Zulu firimu Sarafina!
Guess Doja Cat akatora zvishoma zvehunhu kubva kuna baba vake. Dumisani Dlamini mutambi, muimbi, uye mugadziri wemafirimu.
Hatina chokwadi chekuti aive akaroorwa namai Katsi. Zvisinei, hukama hwavo hwakaparadzana pakarepo mushure mekuberekwa kwaAmala Dlamini.
Sekureva kwaDoja Cat, haana kusangana nababa vake vachikura. Zvichakadaro, Dumisani Dlamini anopindura zvirevo mukuramba. Anoti ane hukama "hune hutano" nemwanasikana wake. Doja Cat anoshuma kuti haana chigumbu pamusoro pake. Icho chiito chakashamisa zvishoma.
Dumisani Dlamini mutambi, muimbi, uye mugadziri wemafirimu.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Doja Cat Amai - Deborah Elizabeth Sawyer:
Amai vaDoja Cat ndiDeborah Elizabeth Sawyer. Iye mupendi uye anoda kuimba kuseri kwemasuo akavharwa. Zvakare, Deborah Elizabeth Sawyer muAmerican ane midzi yechiJuda. Akambogara muRye, NY, uyezve pa ashram muSherman Oaks, CA.
Doja anoshuma amai vake vaive musoro wehip-hop. Kunyangwe chidimbu chacho chaive chitsva kwaari, ainakidzwa neese chikamu. Pane imwe nguva, akaita kuti Doja Cat iridze yakawanda yeErykah Badu, yakawanda Fugees, uye Jamiroquai uye Seal, Earth, Wind, & Fire, Alice Coltrane, John Coltrane, zvinhu zvakawanda zvakadaro.
Mufananidzo waamai vaDoja Cat, Deborah Elizabeth Sawyer.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Doja Cat Vanin'ina:
Rapper wekuAmerican uye munyori wenziyo vakataura zvishoma nezvehama dzake. Zvisineyi, ane vanin'ina nehama mbiri, pamwe vamwe vana vehama.
Kubva pane imwe yenhau dzemagariro, takawana vaviri vehama dzake, Ramlala naLucki. Mufananidzo uri pazasi unopa maonero ekuti vaitaridzika sei sevacheche.
Mufananidzo wekutanga waDoja Cat nevanin'ina vake.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Doja Cat Hama:
Iyo nyanzvi yeAmerica inofanirwa kunge iine dzimwe hama. Doja Cat ine mashoma mashoma emhuri. Kunze kwevabereki vake uye vanin'ina, iye anofanira kunge aine babamunini, vanatete, nasekuru nasekuru.
Sekuziva kwedu, tete vake zvakare muimbi. Zita rake harizivikanwe, asi aive iye akapa Doja Cat zvidzidzo zvekumubatsira kupinda muchikoro chehunyanzvi.
Doja Cat Hupenyu Hwega:
Hunhu hunofadza. Doja Cat muimbi akanaka uye anoyevedza. Ane chitarisiko chinoyevedza uye muviri mutete. Isu takacherekedza Doja Cat nekuda kwekuita kwake kwakasiyana-siyana.
Chimiro chake chinosanganisira genre fluidity ye "crossover-ready pops." Mukuwedzera, kukwanisa kwake kuimba, rap uye kugadzira. Anoratidza kuti anoda kuyeukwa nekuda kwehunyanzvi hwekuona uye kutamba.
Doja Cat haisi yezvematongerwo enyika asi inogara yakatendeka kumanzwiro ake. Doja Cat yakavharirwa pamusoro pezvinhu zvine chekuita nehupenyu hwake. Zvisinei, kunze kwevaraidzo, anofarira kushambira.
Iyo inotaridzika-inotaridzika, inopisa, uye yakanakisa muvaraidzi panguva yekunakidzwa.
Doja Cat Mararamiro:
Isu tinoziva iyo superstar yekugadzira mavhidhiyo uye manzwi. Zvidimbu zvinowana mukurumbira paTikTok uye YouTube. Doja Cat akahwina maviri American Music Honors. Pamusoro pazvose, Doja ndiye wechina anonyanya-Googled rwiyo muimbi we2020.
Uye zvakare, iye akabheja iyo MTV Vhidhiyo Music yeYakanakisa Nyowani Artist uye shamwari yake yeEuropean. Forbes akamutumidza zita remumwe wevatambi vepamusoro ve2020. Vakamunyora pamakore avo makumi matatu pasi pemakumi matatu zvinyorwa.
Nezve zvese izvi budiriro, iye anokwanisa kuwana hupenyu hwoumbozha. Anotenga zvishuwo zvake kubva pamotokari kusvika kudzimba dzake. Mukutanga kwa2021, Doja Cat yakatenga imba muBeverly Hills, California, yemadhora miriyoni gumi nemaviri.
Collage inoratidza Doja Cat nemota yake uye yake $ 2.2M imba muBeverly Hills, California.
Basa raDoja Cat ramuwanisa tarisiro yakawanda. Izvo zvakamupa iye nzvimbo pane akanyanya kushuvira runyorwa rweMusic. Billboard yakatarwa Doja Cat pamashanu paTop Nyowani Artists ye2020. Pamusoro pezvo, akaisa chinzvimbo cheVakadzi Vanyori ve2020 machati. Chinyorwa chiri maererano nekutengesa muUS.
Iyo Kyiv Post yakamutumidza zita remumwe weakakura ari kuuya echikadzi maartist muUS mumhanzi chiitiko. Kuimba kwake kwakatanhamara, kunyora rwiyo, uye hunyanzvi hwekugadzira, kwakamusimudzira kupfuma.
Kunyangwe zvisiri kujeka huwandu hwavakabhadhara Doja Cat yekugamuchira mibairo. Tinogona kutarisira kuti ari kuwana mari yakanaka kubva pachiitiko ichi. Semuenzaniso, mari yeAscarcar inomiririra inowanzoita madhora zviuru gumi nezvishanu kusvika pamadhora zviuru makumi maviri nezvishanu. Chirevo ichi chiri maererano neThe Hollywood Reporter.
Saka zvinoita mubhadharo weDoja weiyo VMAs uri mukati meiyo ballpark futi. Nhasi, Doja Cat ine mambure anokosha emadhora mana mamirioni. Iyo mambure akakosha zvinoenderana neYakakurumbira Net Kukosha.
Doja Cat Isina Chokwadi:
Kunze kweruzivo rwataurwa pamusoro, pazasi pane mashoma anonakidza biography chokwadi chingakufadze.
Chokwadi # 1: Her Stage Zita:
Mugadziri weAmerica akasarudza zita rake remuchadenga nekuda kwekuda kwake sora nekatsi. Fans vanoshamisika, "Doja zvinorevei?" nderimwe izwi rinotaura nezvehuswa. Doja Cat aigara achiputa zvakanyanya paakanga achiri mudiki.
Chokwadi # 2: Nharo:
Kwemakore, Doja Cat's Anopokana Basa yakamutsa mameseji enhau. Imwe nguva mu2018, maTweets ake ekare ane ngochani anonyangadza akamutswa zvakare. Iyo posvo yakagadzira yakawanda hurukuro nezve "kukanzura tsika".
Zvakangodaro, iyo Nyenyedzi yakumbira ruregerero pamateets ake anotsamwisa. Zvakare zvakare, mukupera kwaNyamavhuvhu 2018, Doja Cat yakamutsa kukakavara. Nhoroondo yake yeTwitter yakaratidza mashandisirwo emitauro inoshoreka kune ngochani.
Uyezve, mune tweet mu2015, akashandisa izwi rinoshoreka kutaura nezve hip-hop's Earl Sweatshirt naTyler, Musiki.
Doja Cat pakutanga akadzivirira zvaakataura. Asi akazoburitsa ruregerero rwekukumbira ruregerero pamashoko ake uye akadzima ma tweets ake. Nekuda kwekukakavara, NME yakazivisa Doja Cat iyo Milkshake Dhadha ra2018.
Chokwadi # 3: Kugamuchira vaeni:
Kudzosera kunzanga, Doja Katsi dzinosanganisira mune Anopa zviito. MunaJune 2020, nyeredzi iyi yakapa madhora zviuru zana kuJustice For Breonna Taylor Fund kutsigira mhuri yaTaylor.
Chokwadi # 4: Kufuridzirwa Kwake:
Doja akasimbisa kuti kurudziro yake huru "zvakanyanya Nicki Minaj. ” Iye XXL munyori Stacy-Ann Ellis achicherekedza yavo yakafanana cartoonish kurova kuendesa. Ivo vaviri vane whimsical sartorial sarudza.
Saizvozvowo, Doja Cat akataura Rihanna naD'Angelo pakati pemamwe masimba makuru. Beyonce chikamu chemasimba ekutyaira aakange ave.
Doja Cat nekurudziro yake huru, Nicki Minaj.
Saizvozvo, Doja Cat akatsanangura kuti iyo R & B amai vake vaitamba mumba make yakadururwa muhudiki hwake. Iyo Melody inotangira kubva Pasi, Mhepo & Moto kune Nhema-Eyed Peas. Mitambo yaDoja chipanji chiri kunyura mvura. Iye anodhonza kubva kune wese munhu.
Nekudaro, panguva yebasa rake rekutanga, Doja Cat akataura tsika yechiJapan sekurudziro. Isu takaonawo kurudziro yake kubva kuna Erykah Badu, Pharrell. Zvakare, Jamiroquai, PartyNextDoor, Drake, Indian tsika uye chiHindu.
Chokwadi # 5: Firimu Feature:
Ivo vaitaridza Doja Cat paShiri dzePamberi soundtrack. Iyo firimu ine nyeredzi nhema Mutema wechiJudha mutambi Jurnee Smollett-Bell. Vhidhiyo yacho inonakidza. Panguva ino, ona zvidimbu pazasi zvichiratidza nzvimbo yekurwa apo Doja Cat's Boss B * tch yakaonekwa.
Chokwadi # 6: Soundtrack Kufuridzira:
Vateveri vanotevera vekurekodha, Lil Nas X naCoo Leray, vataura nezveDoja Cat pakati pesimba ravo guru. Billboard akanyora kuti kubudirira kwekutanga kwebhuku rake rechitatu re studio, Planet Her (2021), "yakadhinda pachena Doja Cat semunhu anotsanangura nyeredzi yepakati pe [Generation Z]."
Lil Nas X newaanoda kwazvo, Doja Cat.
Chokwadi #7: Kupindwa muropa nezvinodhaka:
Doja Cat akavhura nezve kupindwa muropa kwake. Muvaraidzi wacho akati akanga achiita zvose zvaaigona kuti arege tsika iyi. Uyezve, ari kushandisa zvinodhaka kwenguva yakati.
Sekureva kwaPop Buzz, mafeni akacherekedza kuti Doja Cat aigara achipukuta mhino dzake. Akaramba achirova mu Instagram Live Vhidhiyo. Zvisinei, akabuda ndokuramba kushandiswa kwemishonga.
Saka, Doja Cat akatsanangura chikonzero chaakatarisa pasi pemamiriro ekunze. Akange ave kunwa husiku hwapfuura. Nyeredzi yakanga yazvipa iyo inonwisa doro.
Doja Cat yakavhura pamusoro pekuputa kwake mbanje.
Doja Cat Biography Pfupiso:
Kusvika ikozvino, isu takadaidza iyo Superstar se "hunyanzvi troll." Iye ane mukurumbira nekuita zvekutamba zvisina musoro zvesocial media.
Pamwe chete nekusekesa kwake uye maitiro ekupandukira. Isu tinoziva Doja Cat nekuda kwerudo rwake rwe "kuita mbeveve shit painternet."
Chekupedzisira, kana iwe ukatadza kuongorora zvese zviri pamusoro, shandisa tafura iripazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezva Amala Dlamini.
Zita rizere: Amala Ratna Zandile Dlamini
Nick zita: Doja Katsi
Zuva rekuzvarwa: 21st Zuva ra Gumiguru 1995
Nzvimbo yekuzvarirwa: Los Angeles, California, nyika dzakabatana
Basa: Muimbi, Munyori wenziyo, Rapper uye Rekodhi Mugadziri
Mitauro: Hip-hop, R&B, pop, yekutamba
Dzidzo: Junior High Chikoro, Los Angeles, California, United States
Baba: VaDumisani Dlamini
Amai: Mai Deborah Elizabeth Sawyer
Vanun'una: Ramala naLucki
Ukama: Johnny Utah (Ex-Mukomana)
Hobbies: Kushambira, Kuimba nekutamba.
kukwirira: 5 ft 5 inches (1.65m)
Muhoro: Hazvina kutsanangurwa
Dzinza / Race: Akasanganiswa dzinza
Residence: Beverly Hills,
Tinovimba wakadzidza zvidzidzo zvishoma. Sezvo isu tinoputira kubva paDoja Cat's Biography uye Yehudiki Hupenyu Nyaya. Pasinei nekuparadzana kwevabereki vake, hupenyu hwakaenderera mberi zvakanaka. Ipapo, shungu dzake dzakamuita kuti aregeredze dzidzo yake. Tarirai, zvakabhadhara.
Kunyangwe ichi chisiri kurudziro yekusiya chikoro. Isu tinotsigira izvo, chero chako chishuwo, chienda icho. Tevera mwoyo wako. Kubudirira kwave pedyo.
Tinotenda kuti wakawana chinyorwa ichi chichifadza uye chinofadza. Naizvozvo, nyoresa kune mamwe biography chokwadi nepamusoro-notch mhando.